Qaabdhismeedka kiimikada: ethylene oxide condensate Nooca: qeexida nonionic: PEG200, 300, 400, 600, 800, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 6000, 8000 Codsiyada Muhiimka ah: dareeraha afka waxaa badanaa loo isticmaalaa xalka afka iyo dareeraha kale ee dareeraha, gaar ahaan waxay leedahay milmi wanaagsan oo loogu talagalay propolis ku jirta alaabada daryeelka caafimaadka taxanaha ah ee propolis, tusaale ahaan, propolis afka ah, kaabsoosha jilicsan iyo wixii la mid ah. Habka xirxira: 50kg durbaano caag ah Mudada nolosha: Saddex sano Heerka Tayada: CP2015 Kaydinta a ...
Codsiyada Ugu Muhiimsan: Shaygaani waa mid aan sun ahayn, xanaaq badan lahayn wuxuuna leeyahay milim biyo fiicnaan, iswaafajin, saliidayn, adhesion iyo xasiloonida kuleylka. Sidaa awgeed, taxanaha 'PEG-300' ayaa ku habboon in lagu diyaariyo kaabsullo jilicsan. Waxay leedahay iswaafajin ballaadhan oo leh dareerayaal kala duwan, sidaa darteed waa dareemayaal wanaagsan iyo xalliyayaal waxaana si ballaaran loogu isticmaalaa diyaarinta dareeraha, sida xalka afka, dhibcaha indhaha, iwm. Habka Xirxirida: 50kg caag durbaanka Nolosha: Saddex sano Tayo Heerka: Kaydinta CP2015 iyo ...
PEG 4000 Polyetylen Glyeol 4000
Codsiga ugu Muhiimsan: kiniiniyada, koodhka-filimka, kaniiniyada, kaabsoosha, suumanka iyo wixii la mid ah. Maaddaama habka wax soo saarka, baaxadda loo yaqaan 'polyetylen glycol', awoodda ay u leedahay inay hagaajiso awoodda kiniinnada sii deynta daroogada iyo sidoo kale PEG (PEG4000 iyo PEG6000) oo leh culeys molikal sare leh ayaa aad waxtar u leh sida xabagta loo sameeyo kiniinnada. Polyetylen glycol wuxuu leeyahay dusha dhalaalaya oo siman oo ay adag tahay in la waxyeeleeyo. Intaa waxaa sii dheer, xoogaa ah PEGS (PEG4000 iyo PEG6000) oo leh culeys molikal sare ayaa ka hortagi kara isku xirnaanta ...
Polyetylen glycol waxaa si weyn loogu isticmaalaa diyaarinta daawooyin badan, sida irbado, udiyaar garowga jirka, u diyaar garowga indhaha, u diyaar garowga afka iyo malawadka. Darajada adag ee polyetylen glycol ayaa lagu dari karaa dareeraha polyetylen glycol si loogu hagaajiyo u nuglaanta boomaatada la mariyo; isku darka polyetylen glycol waxaa loo isticmaali karaa sida matrixka suunka; xalka aqueous polyetylen glycol waxaa loo isticmaali karaa gargaar ganaax ama si loo hagaajiyo u nuglaanshaha warbaahinta kale ee ganaax; polyetylen glycol iyo o ...
Codsiyada ugu Muhiimsan: Saliidaha, suumanka, kareemka. Sababtoo ah barta dhalaalka badan iyo biyo badan oo kala-baxa, oo keligiis la isticmaalo ama lagu qaso dareeraha kale, polyetylen glycol 1000-4000 ayaa gacan ka geysan karta in la gaaro kala duwanaanta barta dhalaalaysa halkaas oo waqtiga iyo goobta badbaadintu ay waafaqsan yihiin shuruudaha daroogada iyo saameynta jirka. Cuncunka ka imanaya maqaarka maqaarka ee 'PEG matrix' wuu ka yar yahay kan saliidda dhaqameed. Habka xirxirashada: 50kg durbaan caag ah Tayada Tayada: CP2015 Nolosha Mudada: Thre ...
Codsiyada ugu Muhiimsan: Saliidaha, suumanka, kareemka. Isku-darka ku habboon ee polyetylen glycol wuxuu leeyahay isku dheelitirnaan gaar ah (sida isku darka PEG300 iyo PEG1500 oo tiro isku mid ah leh), astaamahan waxay ka dhigayaan inay ku raaxeystaan ​​biyo-wanaagga iyo is-waafajinta wanaagsan ee daroogooyinka kale, sidaa darteed waxaa loo isticmaali karaa inay tahay Saliidda budada . Habka Xirxirida: 50kg caag durbaan ah Tayada Heerka: CP2015 Nolosha Mudada: Sedex sano Kaydinta iyo Gadiidka: Shaygaani waa mid aan sun ahayn, ololka dib u dhaca, sida g ...
Codsiyada Ugu Muhiimsan: Miisaanka kelli ee Polyethylene glycol 600 wuu ka weyn yahay kan Polyethylene glycol 400 halka milixda badan ee biyuhu ay yar tahay marka la isbarbar dhigo. Polyetylen glycol 400 waa dareere waxayna leedahay iswaafaqsanaan balaaran oo leh dareerayaasha kaladuwan, sidaa darteed waa dareeraha wanaagsan iyo xalliyaha waxaana aad loogu adeegsadaa u diyaargarowga dareeraha, sida xalka afka, dhibcaha indhaha iyo wixii la mid ah. Marka saliidda khudradda aysan ku habboonayn walxaha sida wada jir firfircoon, ...
Codsiyada Ugu Muhiimsan: Polyetylen glycol 400 ayaa ku habboon in loo diyaariyo kaabsoolka jilicsan inta badan. Polyetylen glycol 400 waa dareere waxayna leedahay iswaafaqsanaan balaaran oo leh dareerayaasha kaladuwan, sidaa darteed waa dareeraha wanaagsan iyo xalliyaha waxaana aad loogu adeegsadaa u diyaargarowga dareeraha, sida xalka afka, dhibcaha indhaha iyo wixii la mid ah. Marka saliida khudradda aysan ku habooneyn walxaha side wax wadawadayaasha ah, polyetylen glycol waa maadada la doorbido maxaa yeelay polyetylen glycol waa sta ...